Soo-saareyaasha Macluumaadka tooska ah ee Internetka, Qalabka iyo Madal-yada
9 Sameeyayaasha Macluumaadka iyo Is-beddelka tooska ah
Khamiis, May 28, 2015 Wednesday, May 5, 2021 Douglas Karr
The warshadaha infographics ayaa qarxaya hadana waxaan aragnaa qalab cusub oo caawinaya. Waqtigaan la joogo, wakaaladaha sawir qaadista waxay ka qaadaan inta udhaxeysa $ 2k iyo $ 5k cilmi baaris, nashqadeyn iyo dhiirrigelin muuqaal qurux badan
Qalabkani wuxuu horumarin ka sameyn doonaa macluumaadkaaga si aad u qiimo jaban, si sahlan loo qaabeeyo loona daabaco, qaarna waxaa ku jira modules ka warbixineed si loo arko sida wanaagsan ee macluumaadkaaga loo qaybiyay loona dalacsiiyay. Qaar iyaga ka mid ah xoogaa waa yar yihiin sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad wax ka qabato waxoogaa bugginess ah, laakiin dhammaantood waa kuwo aad u fiican.
Si taxaddar leh u isticmaal
Waxaa laga yaabaa inaad ku fariisato raxan tirakoob dhab ah oo aad u xiiso badan oo aad isku dayeyso inaad ku dhufato farabadan jaantusyo ah qaab muuqaal ah. Taasi maahan waxa loo yaqaan "infographic" waxaa loogu talagalay, taasi waa waxa Excel loogu talagalay. Infograafiggu waa inuu lahaadaa mawduuc udub-dhexaad ah oo leh ujeedo gaar ah oo ku saabsan waxa aad raadineyso inaad u gudbiso ama u sharaxdo dhagaystayaashaada. Infographic infografi ayaa adeegsadaha ku dhex mara sheekada si ay si fudud ugu haysan karaan una fahmi karaan macluumaadka. Macluumaadkaaga 'infographic' waa inuu ku dhammaadaa nooc ka mid ah wicitaan-u-ficil ah oo lagu wada xiro.
Easel.ly - abuur iyo wadaag fikradaha muuqaalka ah ee khadka tooska ah
IBM Muuqaalo badan - Ku kasbo fahanka xogtaada. La wadaag fikradahaaga qofkasta oo aad jeceshahay. Fikradaha is weydaarsada beel kumanaan ah. Waxaa kuu keenay mid ka mid ah shirkadaha adduunka aad looga ixtiraamo. Oo… waa 100% bilaash.
yaase - Muuji oo Wadaag Xogtaada Daqiiqado. Bilaash.
Infogaan - Waxaan la shaqeyneynaa nashqadeeyayaasha cajiibka ah si aan kuugu keenno waxyaabaha ugu fiican iyo mawduucyada ku saabsan shaxankaaga. Si fudud u soo qaado wax kasta oo aad jeceshahay inaad adigu dhisto.
Maskaxda Garaafka Abuur boodhadh muuqaal leh, maqaallo & bandhigyo. Maktabadooda waxaa ku jira in ka badan 3,000 sawirro cilmiyaysan iyo qaabab farshaxan oo diyaar u ah inay shaqeeyaan.
Piktochart - Piktochart wuxuu ka mid yahay codsiyada websaydhka ee ugu horreeya si loo xakameeyo abuurista macluumaadka. Aragtideeda ayaa ah in loo oggolaado kuwa aan naqshadeynta / barnaamijyadu abuurin is-dhexgal is-dhexgal ah si kor loogu qaado sababahooda / sumaddooda oo ay wax ugu bartaan qaab madadaalo iyo soo jiidasho leh.
Wareegga - Venngage waxay kaa caawineysaa inaad abuurto oo aad daabacdo shaxanka qaaska ah, kaqeybgaliso daawadayaashaada, lana soco natiijooyinkaaga. Venngage waa madbacada daabacaadda macluumaadka ugu xoogan ee abid loogu talagalay suuqleyda iyo daabacayaasha.
Visme waa aalad bilaash ah oo loo isticmaalo in lagu abuuro bandhigyo soo jiidasho leh, sawir gacmeedyo, boorar web iyo animations gaagaaban. Isticmaalayaasha Visme waxay ka bilaabi karaan horudhac qaab-hawleedyo xirfadlayaal ah ama waxay ka bilaabi karaan shiraac maran waxayna abuuri karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyagoo si shakhsiyan ah ugu habboon baahiyahooda.
Xitaa waxaad ka samayn kartaa Infographics ka qalab macruufka ah aad hadda la Abuuraha Macluumaadka.
Shaacinta: Waxaan xiriir la leenahay qaar ka mid ah barnaamijyadan waxaanan isticmaaleynaa xiriiriyeyaal maqaalkan oo dhan.
Tags: samee naqshadfudeydkoronto-dhaliyeaan firfircooneynxogtanaqshadeeye infographicmatoor infographicsameynta infographicmadal infographictusaalooyin infographicmacruufka macluumaadka sameeyahaMacluumaadka Suuqgeyntamatoorrada internetkashaashaddaqalabaargudashofiiri
Tiknoolajiyaddu Ma Yaraynayso Waxoogaa Flop ah!
Sida Looga Hortago Macluumaadka Abuur Isticmaalaha Iyadoo Aan Dacwayn
May 28, 2012 at 12: 56 PM
Waad ku mahadsantahay liiska. Tani runti waa wax faa iido u leh in la arko iyadoo dunida warbaahinta bulshada ay si xawli ah ugu soo jeesaneyso muuqaal ka badan qoraalka.
May 28, 2012 at 6: 55 PM
Oggolow @valerie_keys: disqus! Iyo shaqaalaynta koox naqshadeyn ah oo ku xeel-dheer infographics-ka ayaa ka bixi kara miisaaniyadaha suuq geyn badan. Kuwani waa siyaabo aad u wanaagsan oo aad ku hormarin kartid adigu oo aad hoos ugu dhigeyso kharashaadka!
May 28, 2012 at 7: 34 PM
Waxaan ku aqriyay waxyaabo aad u wanaagsan halkan.
Xaqiiqdii waa u qalantaa calaamadeyn si dib loogu noqdo. Waxaan la yaabanahay intaad isku dayday
dhigay si ay u sameeyaan noocan oo kale ah ee goobta macluumaad wacdaraha leh.
Sep 28, 2014 at 8: 53 PM
Si fiican u qor Douglas oo waad ku mahadsan tahay tixgelinta Visme. Kaliya si loogu daro, Visme waxay ka baxsan tahay faahfaahinta macluumaadka; waxay si qurux badan kuu ogolaaneysaa inaad abuurto
nooc kasta oo ah muuqaalka muuqaalka oo ay ku jiraan animations iyo bandhigyo.